Home YURUB IYO YURUB Fernando Llorente Sheeko dhalasho sheeko xeel dheer
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee ugu caansan oo loo yaqaan 'Nickname'; "Boqorka Libaaxa". Dabeecadeena 'Fernando Llorente' oo ah sheeko xariif ah iyo xaqiiqo aan la isku qorin Xaqiiqooyin ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo oo laga bilaabo wakhtiga carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor warkeeda, nolosha qoyska iyo waxyaabo badan oo aan la ogeyn oo ku saabsan isaga.
Haa, qof walba wuu ogyahay inuu leeyahay awooda weerarka, lakiin dhowr ciyaaryahan ayaa ka fakaraya Fernando Llorente Bio oo xiiso u leh. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Fernando Llorente Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaano -Nolosha Hore
Magaca buuxa waa Fernando Javier Llorente Torres. Llorente wuxuu ku dhashay maalintii 26th February ee 1985 ee Pamplona, ​​Spain. Tani waa isla goobta dhalashada Cesar Azpilicueta. Fernando Llorente wuxuu ku dhashay hooyadiis, Torres Isabel iyo aabihiis, Fernando Llorente Sr.
Llorente ayaa ku soo koray degmada Rincón de Soto ee La Rioja. Cayaartooydu waxay ahayd amarkii maalintaas ee magaalada.
Llorente wuxuu kubada cagta ku soo qaatay Funes (1994-1995) iyo River Ebro (1995-1996). Inkastoo uu u ciyaarayo kooxahan, wuxuu ka shaqeynayay kooxahooda kala duwan, waxaana uu noqday mid ka mid ah ciyaartoyda ugu muhimsan ee weerarada dhalinyarada ah.
Llorente ayaa ku biiray nidaamka dhalinyarada ee Athletic Bilbao ee 1996 da'da 11, isaga oo u qalma xididga Navarrese.
Fernando Llorente ayaa lagu sharraxay "halyeeyga Bilbao" isagoo u ciyaaray kooxda sanadka 8. 2013 wuxuu ku biiray Juventus, isagoo ku guuleystay Serie A sannadkiisii ​​ugu horeeyay. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Fernando Llorente Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaano -Nolosha Xiriirka
La kulan Maria Lorente. Waa jacayl hore oo qurux badan oo xaas leh ee Fernando Llorente. Waxay tahay mid ka mid ah kuwa go'aansaday inay joogaan indhaha dadweynaha oo jecel inay naftooda ilaaliyaan.
Llorente ayaa tan iyo markii uu da 'yarka da' yaraa ku sugnaa Maria. Maria ku dhashay San Sebastian aka Donostia ee Basque Degmo Bulshada, Spain. Waxay tahay gabadha Spanishka barayaasha Severino iyo Pili Lorente. Hooyadeed mar mar waxay wax ku baratay Dugsiga San Bartolome halkaas oo Maria ka soo qayb gashay. Waxay leedahay hal walaasheed, Isabel.
Maria ma raacsana waddada sheekada, waxay doortay in ay noqoto dhakhtarka indhahaEndocrinology waa qayb ka mid ah biyolojiga iyo daawooyinka wax ka qabta habdhiska indhaha, cudurrada, iyo dheecaanka qaaska ah ee loo yaqaan hormoonnada.) Waxay ku jirtay waqti adag markii Fernando ay la saxiixatay Juventus waxaana ay heshay in ay doorato inta u dhaxeysa isaga ama sii joogta oo ay dhameyso waxbarashadeeda, marka ay dhammaato, waxay ku dhamaatay jaamacad waxayna ku biirtay ninkeedii jeclaa.
Maria iyo Fernando ayaa guursaday San Sebastian halkaas oo uu muddo dheer ciyaaray.
Fernando Llorente Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaano -Naftaada Shaqsiga
Fernando Llorente waxa uu leeyahay sifooyinka soo socda ee shakhsiyadiisa.
Xoogagga Fernando Llorente: Wuxuu yahay naxariis, farshaxan, is-qabad, nacfi, caqli badan, muusik.
Fernando Llorentedaciifnimada: Cabsida, kalsooni weyn, murugo, rabitaan ah in laga baxsado xaqiiqada, waxay noqon kartaa dhibane ama shahiid
Waa maxay Fernando Llorente jecel yahay: Kaligaa ah, hurdo, muusik, jacayl, warbaahin muuqaal ah, dabaasha, mawduucyada ruuxiga ah
Waa maxay Fernando Llorente? Dadka ku andacoonaya inay ogaadaan-dhan-oo dhan, lagu dhaleeceeyay, horey u soo noqnoqonayaan si ay ula dhaqmaan, nacaybka nooc kasta.
Fernando Llorente Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaano -Jinsiyada Guud
Hoos waxaa ku qoran liiska rikoorka Fernando Llorente ee aan ku soo aruurineyno.
Fernando Llorente Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaano -Nolosha Qoyska
Fernando Llorente ayaa ka soo jeeda qoyskooda heerka dhexe, ka hor inta uusan kubada cagta ujirin isaga iyo kuwa uu jecel yahay. Hoos waxaa ku qoran waalidkiis; Isabel Torres iyo Fernando Llorente Senior.
Fernando Llorente oo ah aabaha iyo hooyadu waa da 'wayn. Labada waalidba waxay dhalaan wiilkooda inta lagu jiro bartamaha-30.
Gabar: Fernando Llorente waxa uu leeyahay walal magaciisu yahay Chus Llorente. Chus sawirka hoose waxaa sidoo kale wakiil u ah walaalkiis weyn.
Chus ayaa mas'uul ka ah inuu walaalkiis u dhaqaaqo Tottenham oo taageerayaal badani ay ku calaamadiyeen inay ku guuldareysteen inay dhaqaaqaan. Tani waxay sabab u tahay awood la'aanta uu kula tartami karo Harry Kane. Chus Llorente ayaa markii ugu horeysay ku guuleystay tartankii uu kula jiray kooxda Athletic Club, xitaa wuxuu aad u dheeraaday inuu taabto dhadhanka xun mararka qaar. Waxa loo calaameeyay inuu yahay sayid khatar ah oo wadahadal ah.
Fernando Llorente Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaano -Xaqiiqooyin Kale
Sheekadan Asalka ah ee boqorkani ma aha mid ka duwan midka aan garanayno iyo jacaylka. Dhab ahaantii, waxay si qumman u siman yihiin. Iyadoo aan lahayn ado dheeraad ah, waxaan soo bandhignaa tirooyinka muhiimka ah Fernando Llorente nolosha kubada cagta sida jilayaasha "King Lion."
Ciyaaryahan weyn, waa weyn, iyo jir ahaan awood leh, Llorente qaabkiisa ugu weyn waa awoodiisa iyo awooda uu ku leeyahay hawada, taasoo awood u siineysa inuu si waxtar leh u shaqeeyo sida bartilmaameed nin ee bartamaha weerarka kooxdiisa.
Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa dhaqdhaqaaqiisa weerarka, dareenka booska, iyo gooldhalinta goolka gudaheeda; Intaa waxaa dheer, wuxuu sidoo kale hibo u yeeshay xirfado farsamo oo wanaagsan iyo isku xirnaansho, taasoo u ogolaaneysa inuu si fiican u ciyaaro oo uu kubada u ciyaaro si uu kubada u abuuro islamarkaana u helo fursado.
Hubinta FACT Waad ku mahadsantahay akhrinta sheekada "Fernando Llorente Childhood Story" iyo sheekooyinka taariikhda aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku habboonayn qodobkan, fadlan ku qor faalladaada ama nala soo xiriir!.
Koke Caruur Sheeko dheeraad ah Xaqiiqooyinka Raadinta
Ernesto Valverde Ilmaha Hore Sheeko Xogta Warka Xogta
Marco Asensio Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Sami Khedira Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta